Qaabkii loogu waxyooday inay abuuraan superhero | Abuurista khadka tooska ah
Jose Angel | | Fanaaniin, General
Markii aan bilaabayno buugga xusuus qor ama xusuus-qor, waxaan qiyaaseynaa kumanaan shey oo aan ku shaqeyn karno. Haddii aan isku dayno inaan abuurno sheekooyin ama sawirro, waxaan raadineynaa dabeecad cusub. Waxaan rabnaa oo aan aaminsanahay inay bambo noqon doonto hadaan rabitaanka saarinno. Ugu dambayntiina waxaan dooneynaa sawir gacmeedkeenna caadiga ah inuu u beddelo dabeecad filim taariikh ah. Taasi waa waxa hal abuurayaasha sameeyay halyeeyada halyeeyada ugu halista badan ay tahay inay ka fakaraan. Si aan ugu turjunno majaajillada aan hadda jecel nahay.
Qaar badan oo iyaga ka mid ah ayaaba horay looyaqiin oo waxaan u aragnaa inay yihiin wax iska caadi ah oo umuuqda kuwo fudud. Batman, qof kastaa wuu ogyahay inuu yahay fiidmeer, caara caaradu waa caaro iyo 'bakhaarka madow' bakhaar madow. Kuwani waa qaar ka mid ah tusaalooyinka waxa aan halkaan ku arki doonno iyo sida ay ugu waxyoodeen wax maanta u muuqda mid fudud.
2 Ma aragtaa Haweenay
3 Madow madow
Spider-Man wuxuu ku bilaabmay Fantasy Cajiib # 15 sanadkii 1962. Waxaa abuuray Stan Lee iyo Steve Ditko. Markiiba dabeecaddiisa waxaa loo waafajiyay warbaahinta kala duwan. Meesha muusikada Broadway ugu qaalisan ilaa maanta lagu daro, Spider-Man: Demi Mugdiga.
Waxyi loogu talagalay Spider-Man suudka ayaa ka yimid ilo aan macquul ahayn. Kuwo badan ayaa rumaysan in dharka ay xidhatay halyeeyga halyeeyga ah ay dhiirrigelisay dharka 1954 ee dharka carruurta oo uu abuuray Ben Cooper Inc. Stan Lee kuma raacsaneyn mabda'aas wuxuuna culeys badan saarey halyeeyada dhalinyarada.
Ma aragtaa Haweenay
Naagta layaabka leh waa halyeeyada ugu caansan abid abid waxayna soo martay astaan ​​dumar laga soo bilaabo 1941, markii uu markiisii ​​ugu horreysay ka soo muuqday filimka All-Star Comics # 8. Waxaa abuuray William Morton Marston waxaana loo qaabeeyey ka dib fikradda dheddig ee cusub ee geesinimada haweenka.
Naag layaableh ayaa loo jecelyahay xawaare iyo awood sarraysa oo bini aadamnimo leh, jijimooyinkeeda aan xabaddu karin iyo Biliskeeda Dahabka ah ee runta ah ee ka caawiya la dagaallanka nacaybka adduunkeenna. Waxay ku dhiirrigelisay qayb ka mid ah bogagga xarunta Varga Girl ee Esquire ee Marston uu u arkay inay tahay "erotic" iyo "cosmopolitan." Dharkiisa dharka waxaa dhiirrigeliyay xiisaha Marston ee fanka baro kacsi, maadaama uu doonayey muuqaalkiisa dheddig inuu gacan ka geysto ka hortagga ragannimada daran ee jilayaasha kale ee majaajillada ah.
Black Panther wuxuu markiisii ​​ugu horreysay kasoo muuqday filimka 'Marvel's Fantastic Four No. 52' sanadkii 1966. Wuxuu ahaa qofkii ugu horreeyay ee madoow buugga majaajillada ah.. Waxaa abuuray Stan Lee iyo Jack Kirby. Sida uu sheegayo qoraa Stan Lee, magaca astaantu wuxuu ku saleysan yahay halyeey halyeey ah oo leh madow madow oo caawiye ah. Farshaxanka fikradda asalka ah waxaa cinwaan looga dhigay "Dhuxul Dhuxul."
Qiyaastii seddex bilood ka dib markii dabeecadda Black Panther laga soo saaray adduunka 'Marvel global', 'Black Panther Party' ayaa la qabtay. gudaha Oakland, California. Si kastaba ha noqotee, astaanta Black Panther oo ka timid xisbigii ka horreeyay, Lowndes County Freedom Organization, ayaa la soo saaray sanad ka hor sii deynta majaajillada.
Duufaanta waxaa abuuray Len Wein iyo Dave Cockrum. Waxay markii ugu horreysay ka soo muuqatay Marvel universe ee Giant Size X-Men # 1 sanadkii 1975. Dabeecada waxaa qoray Len Wein waxaana jiiday Dave Cockrum. Markii hore loogu talagalay inuu noqdo halyeey lab ah, Duufaanku waxay ku saleysan tahay laba astaamo oo kala duwan oo ka mid noqon lahaa Legion of Superheroes majaajillada: Typhoon iyo Black Cat
Duufaanku waa midka ugu muhiimsan uguna caansan superheroes madow. Sidaa darteed waxay muhiim u ahayd sheekada X-Ragga illaa iyo markii ugu horreysay. Iyadu sidoo kale waa mid ka mid ah geesiyaasha ugu awoodda badan adduunka Marvel.
Kadib guushii Superman, DC Comics wuxuu rabay inuu abuuro halyeey cusub. Tan waxaa wakiishay qoraa buuga maadda ah iyo farshaxan Bob Kane iyo qoraa Bill Finger si loo horumariyo mid. Tani waxay horseeday dhalashada Batman, halyeey aan lahayn awood ka sarraysa, laakiin taa beddelkeed wuxuu lahaa aalado kala duwan oo xiiso leh, oo ay ku jiraan suunka aaladda iyo hubka cadaadiska. Batman wuxuu markiisii ​​ugu horreysay kasoo muuqday majaajilistaha baarista baarista # 27 sanadkii 1939.
Batman waxaa dhiirigaliyay isku darka Sherlock Holmes, Zorro, iyo sawirka Leonardo da Vinci oo ah mashiin duulaya oo leh baalal fiidmeerta. Abuureyaasha sidoo kale waxaa dhiirrigeliyay Dracula iyo The Bat, oo ah filim aamusnaan ah 1926-kii.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Qaabka loogu waxyooday inay abuuraan superheroes